Europe Chitima Route Mepu Nhungamiro | Save A Train
musha > Travel Europe > Europe Chitima Route Mepu Nhungamiro
Tinonyatsobvuma kuti njanji pakufamba ndeimwe yezvakanakisa uye zvakanyanya eco-ushamwari nzira dzekufamba. Kuti zvidaro, isu takabatana pamwe vangangoita gumi nevaviri vatyairi vakasiyana-siyana kukuunzira matikiti akanakisa uye anodhura echitima muEurope. Izvi zvinoreva kuti tinokwanisa kukupa mazana emhando dzesarudzo nepamepu nzira yatinofamba nayo.
Kubva pakakwirira-kumhanya Eurostar kuenda chitarisiko chekurara zvakanaka pakutengeserana, tinopedza nguva yedu yose kuwana zvakanakisisa mitengo saka haufaniri kuita. Kuti zvidaro, takagadzira chinyorwa chemamepu echitima chinoratidza iwe imwe yatinonyanya kufarira nzira dzechitima. Izvi zvinosanganisira nzendo kubva kuLondon kuenda kuParis, Florence kuRoma, uye kwose kwose pakati.
Kana usiri kuona chiteshi chako pano – musafunganya! kudyidzana kwedu kubvumira kuti tiwane imi matikiti pamusoro zvakawanda zvakasiyana chitima mitsetse – omunharaunda migwagwa, kubatana kwenyika, uye yakanakisa yekumhanya-yepamusoro inofamba yese inosanganiswa.
Saka ukaona vamwe rwendo kurudziro, uye kana wagadzirira, tungamira kune redu rekutsvaga peji kuti uwane iwo akanakisa uye akadhura ezitima tikiti kutenderera!
Makwara Edu Mepu Mienzaniso Yeedu Vakakurumbira Maitiro:
1. Zvitima Kubva kuLondon St Pancras International Kuenda kuParis
Chitima chinomhanya kubva kuLondon ichienda kuParis ndechimwe chinokurumidza kwazvo kuEurope. Inoshanda neEurostar, unogona kuzviwana iwe kubva kuUnited Kingdom kuenda kuFrance mumaawa maviri chete nemaminetsi gumi nematanhatu. Izvo zvinokupa iwe kupfuura inokwana nguva yekurara mauri, tora chitima uye unakirwe a rwendo rwezuva kuenda kuguta guru reFrance. Tora baguette uye dzunga the Louvre – kana kungonakidzwa nerunako rwese runofanira kupihwa naParis.
Kubuda kubva kuLondon St Pancras kunoitika nguva dzose, nezvitima zvinomhanya dzinenge awa rega. Izvi zvakafanana zvinogona kutaurwa nezvedzoka kubva kuParis kuenda kuLondon, uye pairi iwe unowana zvese zvinoshamisira zvinotarisirwa munzira yakakwira-yekupedzisira.
Kana uri kugara Paris, iwe unogona zvakare kufamba munzira yakatarisana, iyo ichave iwe uchisvika muLondon mangwanani-ngwanani kana iwe uchida. Iwe unogona kuenda kuSoHo uye tora mu Broadway show kana kungonakidzwa nemamwe pub mari. Chero nzira, Chitima chinopa kupedzisira kuchinjika munguva dzekuenda.
2. Zvitima Kubva kuFlorence kuenda kuRoma Termini
Maviri emaguta epamusoro eItari, Florence neRome vanogara mazana emazana wokukwezva vashanyi yemarudzi ese evashanyi. Art buffs inogona kudzungaira yeVictoria yekubheka pane Sistine chapel. Foodies inogona kunakidzwa neyakango fresest buffalo mozzarella kutenderera. Chero zvaunonzwa, izvi zviviri maguta Italian vari nzvimbo dzakanaka kupedza vhiki kana mashanu.
Even nani, zvitima zvinobatanidza Florence neRoma zvakawanda uye hazvidhuri. Rwendo rwacho runongotora awa nehafu uye une bhonasi yakawedzerwa yemusha wakanaka kunze kwemahwindo ako.
3. Route Mepu: Zvitima Kubva kuRoma Kuenda kuMilan
Takatotaura nezveRoma, asi Milan rimwe rimwe guta rinoshamisa muItari. Zvakasiyana kubva kumaodzanyemba kweItari semaapuro kune maorenji, Milan igori razvino. Inozivikanwa neyayo yakakwirira-kuguma fashoni uye yepamusoro-tech zviitiko, guta racho rinofanira kumira-nguva chero ipi neipi yeku Italia. Nepo mamiriro ekunze asina kunyatsoita seMedithera, uchiri kugona kunakidzwa iyo yakanaka yekuvaka uye nyangwe Museum kana maviri chero nguva yegore.
Rwendo rwekubva kuRoma kuenda kuMilan rwakareba kupfuura rwaFlorence. Hapana chikonzero chekutya, zvisinei, ichiri yakakwanisika kubata maawa matatu nehafu. Izvo zvinongokupa iwe nguva yakawanda yeku vanofarira girl!
Genoa kune Milan matikiti
Roma kuenda kuMilan matikiti
Bologna kune Milan matikiti
Florence kuenda kuMilan matikiti
4. Zvitima Kubva kuHamburg Kuti Copenhagen
Zvinofanirwa kune chero zororo reEurope, Hamburg neCopenhagen zvinogona kunge zvisiri zvekutanga maguta kutenderera mupfungwa dzako kushanya. Zvino nyadzisa, Zvisinei, nekuti maguta ese ari maviri ane mbiri nenhoroondo uye dzinonaka marangi. Hamburg iguta rakakura rechiteshi kuchamhembe kweGerman. Iwe unogona kunge wakambonzwa nezvazvo kare nekuda kwekubatana kwayo ne chikafu chinoshamisa chakakurumbira hamburger. Fun chokwadi – vanhu vanogara muHamburg vanonziwo maHamburger.
Copenhagen, pane rimwe divi, ndiro guta guru reDenmark. Paunenge uchida kushanya mu zhizha kana njodzi inodziya mamiriro ekunze, pane zvakawanda zvekuita muguta regungwa iri. Kubva kune zvivakwa zvine ruvara zvakajeka kusvika kune hip cellar baa, guta reDanish rinotova nezve zvese.
Chitima pakati pemaguta maviri aya chinotora nguva. Nzendo dzinopera anopfuura maawa matanhatu, saka ive shuwa kuunza varaidzo. Izvo zviri kutaurwa, zvitima ndezvechizvino uye vane akati wandei abve ipapo kuti ugone kugara kumashure uye zorora murunyararo.
5. Route Mepu: Zvitima Kubva kuZurich Kuenda kuBern
Kana iwe wakamboda kufamba maAlps, hauzowani nheyo dziri nani dzekuongorora kupfuura Zurich naBern. Zvese zviri mukati nyika yeSwitzerland, maguta awa ingori awa imwe chete Via chitima. Kunyangwe iwe ungangove usina kuzviziva, Bern ndiro guta guru reSwitzerland, kwete chero mamwe maguta ayo anozivikanwa seGeneva kana Zurich. Guta racho rinova nevanhu vanopfuura mamirioni uye rakazadzwa nerunako.
Zvichakadaro, Zurich inozivikanwa yebhengi rayo – kunyangwe iwe uchizozviona wakadzivirirwa nenzvimbo yayo yegungwa pane zvivakwa zvayo. Guta rakagadziriswa zvachose 2,000 makore uye ane mazana mazana mashanu ezviuru zvevanhu.
Kuenda kwechitima kunowanzoitika uye kunoshanda nechitima chemazuva ano, kunyangwe iwe usazove nenguva yakawanda yekuita nemaonero pane izvi nerwendo rwakadaro hupfupi. Batanidza kune wakasununguka WiFi, tsvaga zvishoma, zvino wobva waita – nzira yakakwana yekufamba!
Nenhaurwa dzevafambidzana mhiri kweEurope, unosungirwa kuwana nzira yaunoda. Kunyangwe iwe uri kutsvaga sarudzo dzemuno kana kuronga rwendo rurefu rweupenyu, namatira na Save A Train kuti uwane yakanakisa matikiti esarudzo anowanikwa pamitengo yakanakisa.
Unoda embed yedu Blog romukova “Europe Chitima Route Mepu Nhungamiro” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-route-maps-guide%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)